ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်နှင့်မိုက်ကယ်အဲရစ်
online ရောက်ဖြစ်ရင်လည်း အီးမေးပို့ပါဦးဟ
It's wonderful you posts are really mature.Well done
could you visit http://www.mayvelous.com/?p=254
And you can see Viper's post. What do you think?
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆဲတယ်ဆိုတဲ.စကားကအစွန်းရောက်လွန်းအားကြီးပါတယ်။ဒို.ကိုယ်တိုင်လည်းစစ်သားတယောက်ဘဲ။ဒို.နဲ.ပတ်သက်တဲ့စစ်သားတိုင်းမှာခံယူချက်၊ယုံကြည်ချက်၊အားလုံးရှိ.ကြတယ်။ဒါပေမဲ.အားလုံးရဲ.တူတဲခံယူချက်ကတော.တိုင်းပြည်နဲ.လူမျီုးအတွက်..အမြဲတမ်းအသက်ကိုပေးဆပ်ခြင်းပါဘဲ။ဆိုလိုတာက..တိုင်းပြည်ကိုချစ်စိတ်ဘဲ.။ SOLDIER ဆိုတဲ့စ
မဆဲခဲပါဘူး။ ဒို.ရဲ.တပည်.စစ်သည်တွေလည်းမဆဲခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၉၈
ပေးခဲ.ဘူးတယ်။ န၀တ အစိုးရနဲ.အဆင်ပြေအောင်..တဒေါင်.တ